पो’र्न वेबसाइटमा गणित पढाएर ३ करोड कमाइ ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ प्रमुख समाचार/पो’र्न वेबसाइटमा गणित पढाएर ३ करोड कमाइ !
काठमाडौं। कोभिड महामारीको समयमा अधिकांश शिक्षकले घरबाटै विद्यार्थी पढाए । महामारीसँगै कतिपय शिक्षकले घरबाट पढाउदा विभिन्न बोझ सामना गरे भने केहीले यसलाई अवसरको रुपमा पनि उपयोग गरे । ताइवानका एक शिक्षक भने परम्परागत शैलीभन्दा एक कदमअगाडि बढेका छन् जसका कारण उनी भाइरल बनेका छन् । गणितका शिक्षक चाङशुले पोर्न वेबसाईटमै अललाइन कक्षा होस्ट गरेर चर्चामा आएका हुन् ।
चाङशुम्याथ६६६ मा कक्षा सञ्चालन गर्ने उनको पो’र्नहवमा एउटा प्रमाणित एकाउन्ट छ । उनले २०० ओटा भिडियो सेयर गरेका छन्, जुन यौनजन्य सामाग्रीभन्दा पूर्ण रुपमा फरक छ ।
आफ्नो अस्वभाविक निर्णयबारे चाङ्शु भन्छन्, ‘पो’र्न साइटमा राखिएका भिडियो धेरैले हेर्ने भएकोले मैले नयाँ जुक्ति अप्नाएको हुँ । मैले धेरै भिडियो अपलोड गरे भने प्रशस्त मानिसले हेर्छन् ।’
अहिले उनको आम्दानी पनि राम्रो भएको छ । उनले प्रति वर्ष २ लाख ५० हजार डलर (३ करिड रुपैयाँ) कमाउँछन् । जसका कारण उनले आफ्नो बिल तिर्न र केही कर्मचारीलाई तलब दिन पुग्छ । चााङुशुका अनुसार उनको पोर्नहब च्यानलमा करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी दर्शकहरु गणित पढ्न भन्दा पनि हाँस्नकै लागि आउछन् । उनी भन्छन्, ‘मानिसहरुलाई मेरो भिडियोमा रुची नलाग्न सक्छ । तर, पोर्न साईटमा पनि गणित शिक्षकले राम्रो पढाउछन भन्ने धेरैलाई थाहा हुन थालेको छ ।’